Fitamiin B17: dawayn wax ku ool ah oo looga hortago kansarka - Afrikhepri Fondation
Welcome CAAFIMAADKA IYO DARYEELKA
Vitamin B17: Daawo waxtar leh oo kansar ah
LLaetrile (fitamiin B17) waa shay si dabiici ah u dhaca glucoside oo laga soosaaray kernels kernels oo caan ku noqday 1970. Daraasad ayaa lagu sameeyay bukaanada 179 ee qaba kansarka aan la tacaali karin iyo nabarrada la qiyaasi karo ee lagu daaweeyay Laetrile. Sidii caadada u ahayd waqtigaas, waxay sidoo kale heleen fiitamiino iyo enzymes-ka ganaca. Hal bukaan oo keliya ayaa buuxiyey shuruudaha falcelinta qayb ahaan daaweynta, 90% maadooyinka waxay arkeen horumarka cudurka 3 bilood gudahood. Celceliska cimriguna wuxuu ahaa 4.8 bilood oo keliya. Daaweynta "Beddelka ah" ee kansarka. Ma la caddeeyay mise waa la beeniyay? Waxay qaadatay dhowr sano, iyo xaqiiqda tijaabooyinka kiliinikada ee laga sameeyay adduunka oo dhan, ka hor intaan la soo saarin qaab lagu saleeyo waxtarka Laetrile ee ka hortagga, iyo sidoo kale daaweynta kansarka, ka dib oo dhan. waqtiga la helay magaca "fitamiin B17". Hunzakuts waxay cunaan inta udhaxeysa 100-200 jeer in kabadan B17 cunnadooda marka loo eego celceliska Ameerika, badanaa sababta oo ah cunista miraha khudaarta, iyo sidoo kale masago badan. , Hunza. Ninka hantidiisa waxaa lagu cabiraa tirada geedka khudaarta ee uu isagu leeyahay, cuntada ugu badan ee la jecel yahayna waa abuur ka kooban iniinyaha khudradda, mid ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee B17 ee Dunida. Kooxahii dhakhaatiirta ee booqday waxay ogaadeen in kansarka Hunzacuts uu yahay mid bilaash ah. Mid ka mid ah kooxdii caafimaadka ee ugu horreysay ee daraasad ku sameeya Hunza waxaa hoggaaminayey dhakhtarka qalliinka adduunka caanka ka ah ee Ingiriiska, Dr. Robert McCarrison.
Qoraalka Wargeyska AMA, laga bilaabo January 7 1922, wuxuu yiri:
“Hunza ma lahan wax ku dhaca cudurka kansarka.
Waxay ka faa'iideystaan ​​goosashada badan ee abrikot.
Waxay ku qallajinayaan qorraxda, waxayna si weyn ugu isticmaalaan cuntada.
Laakiin maxaad u maqli weyday fitamiin B17?
Waxay u muuqataa mid fudud!
Waa hagaag, runta arrintu waxay tahay in Warshadaha Kansarka ay caburiyeen macluumaadkan oo xitaa ay amreen inay sharci darro tahay iibinta B17. Maafiyada Caafimaadka waxay ku soo kordhisay ololeyaal "cabsi leh" guul weyn, oo ku saleysan xaqiiqda ah in fiitamiin B17 ay ku jiraan xaddi “sunta” ah ee sunta ah. Tani waxay si cad u khaldan tahay.
Cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa in fitamiin B17 aan khatar u lahayn nudaha caafimaadka leh.
Taasina waa sababta:
Meel kasta oo loo yaqaan 'B17 molecule' waxay ka kooban tahay hal unug oo hydrogen cyanide ah, hal unug oo benzaldehyde ah iyo laba unug oo gulukoos ah (sonkor ah) oo si adag isugu xidhan. Si hydrogen cyanide uu u noqdo mid qatar ah, waxaa marka hore loo baahan yahay in la furo molekle-ka sii deyn doona, xeelad waxaa sameyn kara oo kaliya enzyme loo yaqaan beta-glucosidase, oo aan ka jirin meel kasta oo jirka aadanaha ah, qadar yar, laakiin qaddar aad u tiro badan hal meel: unugyada kansarka.
Sidaa darteed, hydrogen cyanide waxaa kaliya looga furaa goobta uu kansarku ku yaalo, tanina, natiijooyin baaxad leh, oo u noqda kuwo waxyeello u geysta unugyada kansarka, maaddaama unugga benzaldehyde uu isla waqtigaas furmayo. waqtiga.
Unugyada kansarku waxay ku dhacaan labalaab, labadaba cyanide iyo benzaldeyhde! Benzaldehyde ayaa ah sun halis ah kaligeed, laakiin markay ku midoobaan sunta loo yaqaan 'syanide' natiijadu waa sun 100 jeer ka khatar badan tan ay kaligeed shaqayso.
Unugyada kansarku dhab ahaan waa la tirtiraa!
Laakiin intaas oo dhan miyaanay waxyeello u lahayn unugyada intiisa kale ee jirka ku jira? Enzyme kale, rhodanese, ayaa weli ku jira qaddar aad uga badan marka loo eego furitaanka enzyme beta-glucosidase ee unugyada caafimaadka qaba, waxay awood u leedahay inay gebi ahaanba hoos u dhigto cyanide iyo benzaldehyde labadaba thiocyanate (walax aan dhib lahayn), iyo salicylate (oo ah dila xanuunka sida asbiriin u eg). Arrinta xiisaha leh, unugyada kansarka halista ah kuma jiraan rhodanese gabi ahaanba, iyaga oo uga tagaya gebi ahaanba naxariista labada sunta dilaaga ah. Nidaamkan oo dhan waxaa loo yaqaan sunta la xushay, maadaama kaliya unugyada kansarka si gaar ah loo bartilmaameedsado loona baabi'iyo.
Boqollaal daraasadood oo caafimaad oo ay sameeyeen dhakhaatiir badan oo aqoon u leh adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa uu hoggaaminayo Dr. Ernesto Contreras ee Oasis of Hope Hospital ee Mexico, ayaa na siinaya kalsooni buuxda oo ah in daaweyn lagu daaweeyo B17 waxyeello uma laha unugyada caadiga ah.
Tani waa war xun oo ku saabsan Warshadaha Kansarka. Abuurka khudaarta waa raqiis… runtii waa raqiis… ugama qaalisan yihiin dawadooda ugu dambeysa ee is biirsaday ee kemotherabi
Saaxiibkey Jason Vale dhakhaatiirtiisu waxay ku xukumeen dil badhtamihii sagaashameeyadii markii la ogaaday inuu qabo "kansarka" kansarka. Wuxuu ku bartay cilmi baaris dheer in dadka kansarka qaba ay ogaadeen waxyaabo bogsiinaya abuurka tufaaxa iyo khudaarta khudradda, taas oo sidaan kor kusoo sheegay ay kujirto xaddiyo aad u badan. fitamiin B1990.
Jason isla markiiba wuxuu bilaabay inuu dareemo fiicnaan, cunida abuurka tufaaxa iyo khudaar khudaar qayb ka ah cunnadiisa maalinlaha ah. Waqti yar gudahood, kansarka Jason macno ahaan wuu baxay. Markii sheekada Jason ee "Aan Caadi Ahayn" laga sii daayay telefishanka qaranka badhtamihii 1990-meeyadii, waxay soo jiidatay dhagaystayaal.
sidaa daraadeed, isla warbixintan ayaa la baahiyay wakhti labaad, toddobaadka soo socda.
Xamaasadda daawadayaashu aad bay u weyneyd oo Jason wuxuu isku arkay isaga oo ku qulqulaya wicitaanno taleefan, oo ka imanaya dadka ku nool daafaha dalka. Sannadaha soo socda, Jason wuxuu macno ahaan ka caawiyay kumanaan dad ah inay si guul leh u daweeyaan kansarkooda iyagoo cunay iniin khudaar ah.
Jason wuxuu ahaa dhibbane hawlgal feer "Gestapo" ah, oo ay go'aamisay FDA, waxaa lagu xukumay June 18, 2004, lixdan iyo saddex bilood oo xabsi ah iyo seddex sano oo kormeer kormeer ah, maxkamadda degmada ee Gobollada Midow degmada Bariga ee New York. Dembigiisa? Ku iibinta abuurka khudaarta websaydhkooda, oo dadka ugu sheegaya RUNTA waxyaabaha ku bogsiinaya. Ku soo dhowow "dhulkii xorta ahaa iyo dalkii hooyo ee geesiyaasha".
Ka dib markii uu ku dhowaad afar sano oo xabsi ah, Jason waxaa laga sii daayay xarunta xabsiga horraantii 2008.
SOURCE: Kansarka: taariikhda fitamiin B17, daawo dabiici ah oo wax ku ool ah
Dunida aan kansar ahayn, sheekada fitamiin B17
Buuggan 360 wuxuu leeyahay qaabka ay u adagtahay inuu turjumo, ma aha waxa ku qoran luuqada ama falsafadiisa, ee maaha, laakiin isagoo leh sababo waqti, wuxuu go'aansaday inuu turjumo oo keliya hal dabaqyo waaweyn, waxay ahayd mid aad u adag annaga oo aan ogolaano oo aan doorano waxa laga reebayo tarjumaadda, sababta? Sababta oo buuggu yahay mid hodan ah oo cufan ah xogta laga soo bilaabo bogga ugu dambeeya illaa bogga ugu dambeeya iyo inaan fahanno xilliga akhrinta sababta aan weligiis loogu tarjumin Faransiis (muuqaalku waxay u jeedaan xarumaha daawooyinka) aad buu u xanaaqsanaa inuusan ahayn. Tan iyo hadda 38 sano ka hor in uu jiro, waxaan si macquul ah u fekeri karnaa in xaqiiqda ah in guri daabacan aysan dooneynin in ay halista ah u qaadaan Faransiiska dhab ahaantii waxay ku xiran tahay siyaasadda dawada marka loo eego sayniska, wax yar oo ka mid ah shaqooyinka dhakhtarka Faransiiska Faransiiska Dr. Gernez, ayaa lagu riday xabsiga sababo la mid ah.
Buuggani wuxuu inoo keenayaa, iyada oo loo marayo cilmi baaris iyo marqaatiyaal, si uu u barto habab kale oo kansar ah,
masiibadan caalamiga ah, oo saameeya waxyaabo badan oo ka mid ah dunida loogu yeedho. Qaab ka mid ah daawooyinka dabiiciga ah, oo loo yaqaan 'cartelel' oo maamula dunidii caafimaadka, ayaa ka dhigaysa dagaal dabacsan.
Habkani dabiiciga ah ee cudurka wuxuu rabaa inuu daaweeyo iyada oo laga soo xigtay oo aan la daaweynin kaliya calaamadaha iyo astaamaha sida muuqata in ay sameeyaan daawada allopathic "celceliska" xaalado badan oo kansarku yahay kaliya tusaale ahaan.
Daawada allopathic waxay daaweysaa buro kansar ah sida cudurka, daawada dabiiciga ah daaweynaysa cudurkan:
buro waa calaamad u ah cudurka. Marka aan akhrino mawduuca, waxaan ogaannaa in ka hortagga kansarka iyo daaweynta loo samayn karo siyaabo badan, ma jirto habab adag oo dhibaatada ah, laakiin dhammaan hababka daweynta dabiiciga ah, oo ay ku jirto isticmaalka Laétrile ama walaxda nitriloside oo loo yaqaan amygdalin ee qaabkeeda dabiiciga ah ee ku jira dhirta la cuni karo ee ku dhow 1200 iyo miraha,
tixgeli in kansarku uu yahay xanuun dheef-shiid kiimikaad joogta ah (dabadheer sababtoo ah maaha is-daaweyn lana sii socdo, metabolic sababtoo ah waxay ka timaadaa jirka oo aan loo wareejin dadka kale).
"Ma jirto caddayn caafimaad oo ah inuusan jirin daawo dheef-shiid kiimikaado joogto ah oo lagu daaweynayo daawooyinka ama farsamooyinka farsamada jirka (qalliinka)" sida laga soo xigtay Dr Krebs (biochemist, horumariyaha Laétrile), Xaaladaha oo dhan, xalka ku habboon ayaa laga helay xalinta nafaqada ee shakhsiyaadka ay saameeyeen (sida taranka ama pellagra, tusaale ahaan, kuwaas oo ah cillado fitamiin C iyo B3).
"Digniinta, Laétrile waxay si rasmi ah u daweyneysaa daaweyn aan loo baahneyn oo kansar ah.
Qoraaga buuggani waa cilmi-baaris iyo qoraa, ma aha dhakhtar. Xaqiiqooyinka lagu sharraxay boggaga soo socda ayaa ah macluumaadka kaliya oo maaha talo caafimaad.
Hadafkoodu waa in la abuuro saldhigga ogolaashaha aqbalaadda. In kastoo ay jirto wax la samayn karo aagga ka hortagga, daaweynta rugta caafimaadka Kansarka waa in aan lagu baraarin oo keliya.
Maamul kasta oo daweynta ka hortagga kansarka, oo ay ku jirto daweynta nafaqada, waa in lagu fuliyaa si toos ah kormeerka shaqaalaha caafimaadka ee xirfadleyda ah ee ku takhasusay beerahooda. "
Dunida aan lahayn kansar (waxyaabo waaweyn) Taariikhda Vitamin B17 (Laétrile)
By G. Edward Griffin (1997, 2th Edition, 13th 1998 Reprint)
Kansarka Aduunka la'aantiis
2 cusub oo ka yimid € 24,38
3 waxaa laga isticmaalay € 27,59
Iibso € 24,38
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo Febraayo 23, 2021 9:54 PM
category CAAFIMAADKA IYO DARYEELKA
La soco nin Gemini (2019)
La soco Xaaska Wadaadka (1996)
La soco Aquaman (2018)
Calaamadda Masiixa ee qoraxda qoraxda ama calaamad?